Kolombia: adihevitra ao amin’ny Twitter momba ny faharoanjato taona sy sary famantaran’ny Google · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2010 8:02 GMT
Nankalaza ny faharoanjato taona nanambarana ny fahaleovantenany sy ny fanombohan'ny ady izay nifarana ny 7 Aogositra 1819, izany hoe rehefa nahazo madio mangarangarana ny fahaleovantenany avy tamin'i Espaina i Granada vaovao, ny 20 jolay lasa teo i Kolombia.
Vao maraina tamin'io andro io dia taitra noho ny sarim-pamantarana nasehon'i Google fiantso hoe Doodle ny mpampiasa Twitter sasantsasany, fa nasongadina [es] tao amin'ny takela-pandraisan'ny Google Kolombiana [es] izy io. Tovovavy 14 taona antsoina hoe Yennifer Valderrama no nanoritsoritra ilay sarim-pamantarana, izay maneho [es] “ Sarina sambo Espaniola iray mandao ny nosintsika sy ny saina Kolombiana izay natsatoka tamin'ny iray amin'izy ireny ho mariky ny fahafahana.”
Ary mampahatsiahy ahy kokoa ny fahaleovantenan'i Cartagena, 11 Novambra 1811 ilay Doodl an'i Google fa tsy ny an'ny Santafé 20 Jolay 2010
Ankehitriny ity firenen'ny boky tantara fanao am-paosy ity, voafihina an-tanana ny sainam-pirenena, vita amin'ny sombrero vueltiao ny sary fandefa amin'ny paositra ary amin'ny ‘pop tropical ‘ no ankalazana azy.
Mikorontana aoka izany ny fandaharampotoanako noho ny faha #roanjatotaona. Tsy hitako mihitsy androany na aiza na aiza ilay antsoina hoe firaisam-pirenena noforonin'i Íngrid Betanc[o]ur[t].
Colombia = Fitiavana, TwitterColombia = DRAME [LOZA]! Na ny loza ANDROANY aza tsy mora ny manala azy…